शारीरिक सम्पर्क गर्दा ३८ बर्षिया महिलाको ज्यान गएपछि १९ बर्षिय प्रेमी पक्राउ आखिर कसरी ? पुरा पड्नुहोस ! -
मुसिकोट शहीद मैदानमा मंगलबार बिहान फेला परेको एक महिलाको शवको परीक्षण गर्दा शारीरिक सम्पर्क गर्ने क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर–६, घर भएकी ३८ वर्षीया एक महिलाको यौन सम्पर्क गर्ने क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले बताएको हो ।
प्रहरीले हत्याको अभियोगमा मुसिकोट नगरपालिका–१, निवासी १९ वर्षीय अमरबहादुर बादीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका बादीले राति आफ्नै डेरामा ल्याई शारीरिक सम्पर्क गर्ने क्रममा महिलाको ज्यान गएको र मृत्युपश्चात शव बोकेर नजिकैको नालामा फालेको स्वीकार गरेका छन् ।
Wed-May-2018, 02:36 pm मा प्रकाशित, 190 जनाले हेर्नुभयो